အဆိုပါတဖန်၏အခြေခံစာသားကိုရှေးစာမူကထေ | Apg29
ဘို Hagstedt, ဥက္ကဋ္ဌ, အန်ဒရီ Juthe Ph အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဃဆွီဒင်တဖန်။
ဤဆောင်းပါးသည်သစ်ကိုအခြေခံစာသားရွေးချယ်ရေးထံသို့ ဝင်. မည်ကဲ့သို့ရှင်းလင်းဥပမာပြသထားတယ်။
→တစ်ဦး pdf ဖိုင်အဖြစ်ဆောင်းပါး download လုပ်ပါ။
ဤဆောင်းပါးသည်သစ်ကိုအခြေခံစာသားရွေးချယ်ရေးထံသို့ ဝင်. မည်ကဲ့သို့ရှင်းလင်းဥပမာပြသထားတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ပျေါလှငျတှငျပါရှိသောတကျိပ်နှစ်ပါးဥပမာပါဝင်သည်:
သူတို့ထဲကအတော်များများမူရင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းနှုတ်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်ထင်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထို့နောက်တညျ့သောပါးစပ်ဂီယာအတွက်ရသောအခါအမှားသည်ထ။ သူတို့ကဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကိုရှေ့ဦးစွာ မှစ. ရှိခဲ့သောအမှားများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ဒေသနာစာသားကိုကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
ရှေးစာမူအပါအဝင်တစ်ခုတည်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖိုင်ပါလျှင်အကြောင်း, သူတို့မှားကို ရွေးချယ်. ဒါကြောင့်သူတို့တညျ့ကတည်းကအမှားရှိအသင်းတော်များ၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်, လက်ျာအသုံးအနှုန်းထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ သခင်ဘုရားသည်လူအပေါင်းတို့ကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းပေးသောခြင်း, မိမိစကားလုံးစောင့်ရှောက်ရမည်ဟုကြောင်းပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်လုပ်, လုံးဝကျမ်းစာနှင့်မညီဖြစ်ပါတယ်။
Aila Annala ဟာ 1500 ကနေအဟောင်းအခြေခံစာသား, စာမူ 900-1200 ရာစုအပေါ်အခြေခံပြီးရရှိထားသည့်စာသားကြောင့်ငြင်းခုန်။ သို့သော်ဤတစ် tenacious ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာတရားကို၎င်းရရှိထားသည့်စာသားကိုလည်းဤဆောင်းပါးကိုသက်သေပြလတံ့သောအဟောင်းများကိုစာမူပေါ်တွင်အခြေခံကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတဖန်ငါတို့သည်သန့်ရှင်းသောဘုရားကမျြးစောငျမြားနှငျ့အခြေခံစာသားကိုညျဘုရားသခငျ၏ Providence မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးယုံကြည်ကြသည်။
တချို့ကအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ Aila Annala, ကျောင်းအုပ်ကြီးဘာသာပြန်ဆိုသူ nuBibeln သူမကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌အကြောင်းကိုငြင်းခုန်မနေသင့်ကြောင်းထောက်ခံရှိရာအဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ယနေ့တွင်။ သူမသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးအသေးစားနှင့် de-Christianized တိုင်းပြည်များမှာဤဘာသာပြန်ချက်များကိုဖြည့်စွတ်ဖြစ်ကြောင်းသော်လည်းဆွီဒင်များစွာကိုကောင်းသောဘာသာပြန်ချက်များကိုရှိသည်ဟုဆိုသည်။ Aila တချို့လူတွေခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းဘို့ 2000 ခုနှစ်ကမျြးစာကိုစွပ်စွဲကြောင်းနောင်တ။ သူမလည်းယခုကြှနျုပျတို့အဟောင်းတွေစာမူပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည် 1970 ကနေသစ်ကိုအခြေခံသည့်စာသားအပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်များဘာသာပြန်ချက်များကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်ပိုကောင်းလုပ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကပြောပါတယ်။
ဆွီဒင်တဖန်ထံမှကျွန်တော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဘာသာအခြေခံခရစ်ယာန်အယူဝါဒဆန့်ကျင်တဲ့အဖြည့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ညျသနျ့ရှငျးသောကမျြးစောငျအကြောင်းကိုငြင်းခုန်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သည်သန့်ရှင်းသောဘုရားအညီကျမ်းစာလာသည်နှင့်၎င်း၏အခြေခံစာသားကိုခုခံကာကွယ်ဖို့လိုခငျြ, ငါတို့ဘုရားသခငျ၏ Providence ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးအသုံးပြုပုံယုံကြည်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထိန်းသိမ်းမယ်လို့ကျမ်းစာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေခံချက် (ဟေရှာယ 40 ဖြစ်ပါတယ်။ 8. နေ 8: 8 ဆာလံ 12: 6-7, 119: ။ ။ 152nd မဿဲ 5:18 Lk 16:17 ရော 15: ။ ။4။ 1 Pt ။ 1: 23-25) ။ ဒါဟာအစကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည်၎င်း၏စာသားကိုအပေါ်အားကိုးလို့မရဘူးဆိုပါကကမျြးစာကိုယုံကြည်စိတ်ချရန်အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဥပမာသိလား ပို. ပင်အတိုကောက်ကတော့အာလေဇစာသားကိုထက်ဖြစ်ကြောင်းအဟောင်းတွေစာမူမရှိအနာဂတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုယခုကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားဖွယုံကြည်စာသားစေသည်, အဲဒီမှာတကယ်မဟုတ်လော အဆုံး၌, ဘုရားသခငျ၏တပြင်လုံးကိုစကားလုံးထိခိုက်ပျက်ပြားစေ။
2000 ခုနှစ်ကမျြးစာကခရစ်တော်၏ဘုရားတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စွပ်စွဲပေမယ့်ကိုသာရိုးရိုးသားသားအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူးလျော့နည်းစေသည်။ ဒါဟာရောမမြို့မှာရှိတဲ့ဖတ်ရှုဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ 1: 4, ဘယ်မှာ 2000 ခုနှစ်သမ်မာကမျြးသညျယရှေုကိုသေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားကဲ့သို့ install လုပ်ထားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ သို့သော်ယေရှုဟာသူ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုကြောင်းအကြောင်းကြားမခဲ့ - သူသညျဘုရားသခငျ၏သားအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်နှင့်သူ၏အသက်, သူသေဆုံး, သူ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ထာလျှောက်လုံးညျဘုရားသခငျ၏သားခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ, ယရှေုသေးငယ်တဲ့မုတ်ဆိတ်နှင့်အတူဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်, တနေ့ဒူးညွှတ်ခြင်းနှင့်သခင်, ဖီးလ်အဖြစ်ယေရှုဝန်ခံသည့်အခါဖြစ်ပါတယ်။ Matt အတွက်မြို့တော်ကို C နှင့်အတူရော့ခ်ပတေရုသတောင်းဆိုနေချိန်မှာ 2:11, သေးငယ်တဲ့ဇနှင့်အတူလူကြီးလူကောင်းရေးသားခဲ့သည်။ 16:18 ။
Aila ကြောင့်တမန်တော်စာသား FNns ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါရရှိထားသည့်စာသားအတွက်ဆက်ပြောသည်သော 6:9။ ဒါဟာတမန်တော်များတွင်အောက်ပါစကားများကြောင့်မှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ်။ 9: 5-6 အများဆုံးဂရိစာမူပျောက်ဆုံးနေသည်:
အခနျးငယျ 5. "သင်ဖောက်ရာဆန့်ကျင်ကန်ရန်အဘို့အဒါဟာခက်ခဲတယ်။ " ဒါဟာဟောပြောသောဤစကားကိုအများဆုံးဂရိစာမူအတွက်ပျောက်ဆုံးနေဒါပေမဲ့သူတို့အဟောင်းလက်တင်စာမူသည်ဗျာဒိတ်အတူ FNns မှန်ပါတယ်။ အဆိုပါစကားဆီးရီးယား Peshitta စာမူနှင့်ဂရိစာမူ, code ကိုအီးနှင့် 431 အတွက်, ဒါပေမယ့်ကျမ်းပိုဒ်အစားလေးလည်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်တမန်တော်အပေါငျးတို့သဂရိစာမူအတွက်စကားလုံးများ FNns ။ 26:14 ။
အခနျးငယျ 6. "တုန်လှုပ်လျက်, မိန်းမောတွေဝေလျက်နှစ်ဦးစလုံးသူကဆိုသည်: သခင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်ချင်ပါသလဲ? ထိုအခါထာဝရဘုရား၏အထံတော်ကပြောပါတယ်။ "ဤစကားကိုလည်းအများဆုံးဂရိစာမူချို့တဲ့ရသောအမှုသည်ပေမယ့်ရုံကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင်စကားများ5FNns အဟောင်းလက်တင်စာမူအများစုတို့သည်ဗျာဒိတ်ကဲ့သို့၎င်း, အချို့ရှေးဟောင်းဆီးရီးယားနှင့် Coptic အဘိဓါန်ဗားရှင်းအတွက်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ထို့အပြင် FNns တမန်တော်များ၏စာအုပ်ထဲတွင်အခြားသောအရပ်၌အ v5 ၏စကားများကဲ့သို့အားလုံးဂရိစာမူဤစကား (တမန်တော်။ 22:10) ၌တည်၏။
ကျမ်းပိုဒ်5နှင့်6၏စကားများ၏အရေးအပါဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်အတူတူစာသားကိုတမန်တော်တမန်တော်နှစ်ခုတခြားနေရာတွေမှာပုံပေါ်သဖြင့်, သန့်ရှင်းသောကမျြးစောငျကအတည်ပြုသည်။ 22:10 နှင့် 26:14 ။
အဟောင်းတွေစာမူမှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သူတို့က 1500 ခုနှစ်တွင်ရှိခဲ့ထက်အသက်ကြီးစာမူပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မှန်သည်။ Aila ဟာ 1500 ကနေအဟောင်းအခြေခံစာသား, စာမူ 900-1200 ရာစုအပေါ်အခြေခံပြီးရရှိထားသည့်စာသားကြောင့်ငြင်းခုန်။ သို့သော်ဤတစ် tenacious ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာတရားကို၎င်းရရှိထားသည့်စာသားကိုလည်းအဟောင်းတွေစာမူပေါ်တွင်အခြေခံကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Aila သည်ဤစာမူနေသောသူ၏နောက်ဆုံးအညီမေးတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့ကဤတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအခြားတစ်ဦးကျမ်းပိုဒ်ကနေမတူညီတဲ့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါဒါ 350 ကနေ 400 ရဲ့ရန်ဖြစ်ပါသည်ရသောဂရိရှေးစာမူမှာကြည့်ရှုသောအခါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအကြွင်းမဲ့အာဏာအများစု၏ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူအဖြစ်အစောပိုင်း 1500 သည်အထိ 500 ကနေစာမူကြည့်ရှုသူတို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏။
Metzger မှာဗိုင်ဇန်တိုင်းစာသား "NT Textual ဝေဖန်၏သမိုင်း" ကျူစက္ကူစာမူ, P45, p46 နှင့် p66 ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင်ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယရာစုမှရက်စွဲပါခံရနိုငျသောläsvariationထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်အတွက်ဝန်ခံသည်။
ကျနော်တို့တိကျတဲ့ကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့်ခင်မှာကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ယခင်ကဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူ၏စစ်မှန်သောစသည်တို့ကိုအများအပြားဆောင်းပါးများအတွက်စောဒကတက်ခဲ့ကြကြောင်းပြောချင်တာပါ။ ဤရွေ့ကားစာမူတို့သည်ကြီးစွာသောကိုက်ညီမှုရှိသည်နှင့်ရှိပါတယ် - ငါတို့သည်မြင်ရအဖြစ် - ညျဘုရားသခငျ၏ Providence မှတစ်ဆင့်မူလအခြေခံစာသားကိုစောင့်မတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကတိပြုထားသည်နှင့်ကရရှိထားသည့်စာသားသညျဘုရားသခငျရဲ့ထိန်းသိမ်းထားစကားလုံးများကိုဖြစ်ပါတယ်မပါလျှင်, စာသား Aila သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ရာစုနှစ်များစွာကတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းထိုသို့ပြုသလော ဒါဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးသူတို့သညျယရှေုခမညျးတျောကဲ့သို့တူညီသောသဘောသဘာဝခဲ့ကြောင်းမယုံသောကြောင့်, သြရီဂျင်ကို, ယူစီးဘီးယပ်, Westcott နှင့် Hort ရွေးချယ်ရွေးကောက်တော်မူထိုကဲ့သို့သောဖတ်နဲ့တူသညျယရှေုဘုရားမရှင်းလင်းသည်အဘယ်မှာရှိသောသူ, လူဖြစ်ရပြီကြောင်းသိသာသည်။ ဒါဟာတကယ်အတော်လေးမျှော်လင့်ထားသည်
ရွေးချယ် antibysantisk ရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်း
ယခုကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားခေတ်သစ်ကာလ၌သဘောတူညီခဲ့ဘယ်လိုတစ်ကွန်ကရစ်ဥပမာကိုငါပေးမည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစာသား၏ရွေးချယ်ရေးထံသို့ ဝင်. မည်ကဲ့သို့နားလည်ရန်အဘို့, ငါတို့သည်လည်း 1970 ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကအသုံးပြုတဲ့သစ်ကိုအခြေခံစာသားနဲ့ပြုပြင်မော်ဒယ်ပေး၏သူငါးယောက်တို့ကအကြောင်းတစ်ခုခုသိကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။ စာမူ၏အဘယျသို့သောငါးပါးအယ်ဒီတာများမျက်နှာသာ? ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ Carlo Martini လက်ဇန္ဒြီးယားမှသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တီ, တင်ပြခဲ့သည်။ သူကအကျင့်ပျက်ဖြစ်စဉ်းစားအဖြစ်ဘရုစ် Metzger မှာဗိုင်ဇန်တိုင်းစာသားအသုံးပြုမှုကိုလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ Allen က Wikgren မူရင်းစာသားကို restore ရန်ကြိုးစားရန်အဟောင်းကိုသင်ကြားရေးပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့ချင်တယ်။ ဒါကသူကဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူတှငျတှေ့ရရှိနိုင်သည့်စာသားနှင့်ရရှိထားသည့်စာသား၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ချင်ကြဘူးဆိုလိုတယ် ဒါပေမဲ့သူလက်ဇန္ဒြီးယားမှဆင်းသက်လာသောစာမူမှတဆင့်တစ်ဦးထင်အဟောင်းများနှင့်ပိုပြီးမူရင်းပုံစံစာသား restore ချင်တယ်။ မဿဲက Black မှာဗိုင်ဇန်တိုင်းစာသားကိုရိုက်ပါကမူလမဟုတ်ခဲ့ခံစားခဲ့ရသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ပေါင်းစည်းနှင့်အခြားသူများဒေသနာစာသားကို ATAD ။ နှစ်ဦးစလုံးဂရိစာသား, NestleAland 1979 (သမ်မာကမျြးနှင့် nuBibelns အခြေခံစာသားပြည်သူ့), နှင့်ကျမ်းစာအသင်းဂရိစာသား, 1975 (သမ်မာကမျြး 2000 အခြေခံစာသားကို) အတွက်တာဝန်ရှိသည်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ Kurt အော်လန်ရှိသည်။ အော်လန်ကမူလစာသားကိုတည်ထောင်ရန်ဆီလျှော်သောကွောငျ့သူတို့က, ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကိုအမျိုးအစားအသုံးပြုမှုကိုလုပ်မပေးနိုင်ခံစားရတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါးကိုသူတို့လက်ဇန္ဒြီးယားကနေအဟောင်းစာမူနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုသောမူရင်းစာသားကိုထပ်ဖွဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့သဘောတူညီခဲ့နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပေါင်းစည်းနှင့်အခြားသူများဒေသနာစာသားကို ATAD သောဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကို type ကိုမြင်ဘူးသောကွညျ့ပါ။ ကအောက်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်အရှင်မှားယွင်းနေသည်ထမတိုင်မီထိုမှတပါး, နှုတ်အစောပိုင်းပြန့်ပွား၏မူလယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားသော Black နဲ့ Metzger နှစ်ဦးစလုံးအရသိရသည်။ ( 5. Black က, p ။ 633. 6. Metzger, p ။ 86) အမှား, ဤလူတို့သညျရဲ့သီအိုရီအောက်, ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူဖို့ဘုရားကျောင်းကတည်းကတညျ့။
Metzger ရှင်းလင်းစွာကသူ့စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်မှာဒီလိုဖော်ပြထား: "အသင်းတော်များ၏အဘခမည်းတော်၏လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ကျမ်းပိုဒ်အပေါ်မတူတဲ့အခါမှာကနောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးကိုစာသား (အဘိုင်ဇင်တိုင်းသို့မဟုတ်ဗားဂိ) မှအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်လကျခံဖို့အများအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်" ။ ( 1. Metzger, စာမျက်နှာ 87) အဘတို့ကနေကိုးကား၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်ရရှိသော, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာသားကိုကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာစာသားရွေးချယ်မှုအဘို့ဤအလုပ်လုပ်ကိုလည်းအခြေခံသိမြင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသူတို့အားလုံးအလွန်အသက်ကြီးသောကြောင့်ဤအအယ်ဒီတာများအဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ခဲ့သည့်ကြီးမားသောအက္ခရာများ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရှေးစာမူ၏နံပါတ်, FNns ။ အများစုကတော့, အနိမ့်အမှုအက္ခရာများနှင့်အတူတွေထက်အသက်ကြီးမြို့တော်အတွက်စာမူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာတှငျကြှနျုပျတို့ဂျေအေ Moorman, အစောပိုင်းစာမူ, ဘုရားကျောင်းအဘတို့နှင့်, Authorized ဗားရှင်း, (4 Moorman) နှင့်ဘရုစ်အမ် Metzger ရဲ့စာအုပ်, ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်းအပေါ်တစ်ဦးက Textual Commentary, ( 2. Metzger) ၏စာအုပ်တွေထဲကနေအဓိကအားဖြင့်ဒေတာစုဆောင်းခဲ့ကြ ဒီနေရာမှာကြီးမားတဲ့အက္ခရာများ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အဆိုပါစာမူတချို့၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
Code ကို Sinaiticus (Alef) ကို 300 ရဲ့ထံမှ။ တစ်ခုလုံးကို NT ပါရှိသည်။
400 ရဲ့အားဖြင့်ကျင့်ထုံး Alexandrinus (က) ။ အားလုံးနီးပါးဟာ NT ပါရှိသည်။
300 ရဲ့အားဖြင့်ကျင့်ထုံးတီ (ခ) ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏နောက်ဆုံးလေးခုစာအုပ်တွေ မှလွဲ. အားလုံးနီးပါး NT ၏ပါရှိသည်။
Code ကို Ephraemi Rescriptus (ဂ) 400 ရဲ့အားဖြင့်။ NT ပါရှိသည်။
Code ကို Bezae Cantabrigiensis (ဃ) 400 ရဲ့အားဖြင့်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့တမန်တော်ပါရှိသည်။
500 ရဲ့အားဖြင့်ကျင့်ထုံး Claromontanus (ဃ) ။ ဂရိနဲ့လက်တင်အတွက်ပေါလု၏စာပါဘူး။
Code ကို Basilensis (အီး) က 700 ရဲ့ထံမှ။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများပါဝင်သည်။
Code ကို Washingtonianus 400 ရဲ့အားဖြင့် (W) ။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများပါဝင်သည်။
ထို့အပြင်ပင်အဟောင်းနဲ့ကျူစက္ကူစာမူဟုခေါ်သည်ဖြစ်ကြောင်းစာမူ၏နံပါတ်ကနေအပိုင်းအစ FNns ။ ယခုကြှနျုပျတို့ပြုပြင်မော်ဒယ်တွေ့မြင်အချို့တိကျသောကျမ်းပိုဒ်မှာကြည့်ရှုမည်, ဤငါးယောက်ျားလျှောက်ထားခဲ့သည်။
ဖြစ်မှု။ 7: 8 နေဆဲအချို့စာမူပျောက်ဆုံးနေ
ဖြစ်မှု၌တည်၏။ 7: အဋ္ဌ ယရှေုသညျယေရုရှလင်မြို့၌ပွဲတော်မှတက်မသွားသင့်တယ်နှင့်ခနျးငယျ 10 ၌မိမိညီအစ်ကိုတို့ပွဲတက်ပြီးမှ, ထို့နောက်သူလည်းရှိသှားသောကပြောပါတယ်ကြောင်းကျမ်းပိုဒ် 8 မှာကပြောပါတယ်။ အတော်များများကစာမူသေးစကားလုံးရှိသည်။ ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးလျှင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စကားလုံးနေဆဲအရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ယရှေုသညျအမှနျတရားကိုမမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ စကားလုံးကဲ့သို့သောကျူစက္ကူ 66 နှင့် 75 နှင့်စာသားဝေဖန်သူများက '' အကြိုက်ဆုံးလက်ရေးဗာတီကန်အဖြစ်အစောပိုင်းစာမူအတွက်သေး FNns, သူတို့läsartenရှေးပါပွီသင့်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်အသက်အကြီးဆုံးစာမူ၏အကျဉ်းချုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ကျနော်တို့တောင်မှ 200 ရဲ့ထံမှကျူစက္ကူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် P66 နှင့် P75 အပါအဝင်အသက်အကြီးဆုံးစာမူကြားတွင်အကြီးအကျယ်အတူဖြစ်ထောက်ခံမှုများစုစည်းအတွက်ကြည့်ရှုပါ။ ငါးအယ်ဒီတာများကျွန်တော်တို့ကို 1975 ခုနှစ်တွင်သစ်ကိုအခြေခံစာသားကိုပေး၏နှင့် ဆက်စပ်. , ထို့နောက် Metzger သူသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကျမ်းပိုဒ်မှာလုပ်သောရွေးချယ်မှုအပေါ်မှတ်ချက်စုစည်းသောစာအုပ်ထုတ်ဝေအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဤတွင်သူသည်အောက်ပါမှတ်ချက်ရေးသားခဲ့သည်:
(2 Metzger, စစ။ 185) "စာသားသေးကျမ်းပိုဒ် 8 နှင့် 10 အကြားမကိုက်ညီလျော့ပါးစေရန်စောစောပါဝင်သည်ခဲ့သည်"
ဒါကသိပ္ပံနည်းကျကြေညာချက်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲမျှသာတစ်ခုယူဆချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်နေဆဲရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည်ဤကမျြးစာကိုအယ်ဒီတာများမှန်းဆ? မူလစာသားကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ပါးစပ်ဂီယာ၏, သူတို့ကိုအရသိရသည်အမှားအယွင်းများပါရှိသောကြောင့်အကောင်းပြီ, သူတို့ကမှားလျှင်ပင်မူရင်းပုံသဏ္ဍာန်မှစာသား restore ချင်တယ်။ ဗိုင်ဇန်တိုင်းကိုစာသားနှင့်ဗားဂိနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအယ်ဒီတာများသည်နှင့်အညီနောက်ပိုင်းဒေသနာကိုစာသားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ပင်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလက်ရေး, ဗာတီကန်နှင့်လည်းကျူစက္ကူစာမူနှစ်ခုသေးကြောင်းစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအခါရှေ့ဦးစွာ မှစ. ရှိကိုလက်ခံသည်မဟုတ်လော သူတို့ရဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစာသားကိုများအတွက်ဗျာဒိတ်အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးကိုစာသားအနေဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ အဖြေအားလုံးမှမော်ဒယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ငါးပါးအယ်ဒီတာများကပြောသည်နှင့်လူအပေါင်းတို့၏ကြာရှည်မပေးကြောင်းပင်ဖြစ်သည်ဗာတီကန်အတိုင်းလိုက်နာခဲ့ပေမယ့်ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူ၏ပုံစံသည် "ဘာသာရေးစာသားကို" ကိုလိုက်နာဖို့မတကာတို့ထက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သစ္စာရှိရှိ trad ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထက်ပိုမိုတဆယ်ရာစုနှစ်ဦးဆောင်သောဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကိုအောက်ပါမဟုတ်အရာအားလုံးထက်ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအလုံးစုံစာသားကိုပစ္စည်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ကြီးကဗာတီကန်သူတို့တဘက်၌မိနျ့တျောမူသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလက်ရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ antibysantiska ရပ်တည်ချက်ငါးပါးအယ်ဒီတာများကစာသားရွေးချယ်ရေးအများစုထူးခြားတဲ့ feature ကိုကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအလုံးစုံစာသားကိုပစ္စည်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ကြီးကဗာတီကန်သူတို့တဘက်၌မိနျ့တျောမူသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလက်ရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ antibysantiska ရပ်တည်ချက်ငါးပါးအယ်ဒီတာများကစာသားရွေးချယ်ရေးအများစုထူးခြားတဲ့ feature ကိုကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအလုံးစုံစာသားကိုပစ္စည်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ကြီးကဗာတီကန်သူတို့တဘက်၌မိနျ့တျောမူသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလက်ရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ antibysantiska ရပ်တည်ချက်ငါးပါးအယ်ဒီတာများကစာသားရွေးချယ်ရေးအများစုထူးခြားတဲ့ feature ကိုကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
မာကု။ 1:2သို့မဟုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းပရောဖက်ဟေရှာယ
မာကု၌တည်၏။ 1: 2, မေးခွန်းက '' ပရောဖကျဟရှောယ 'သို့မဟုတ်' 'ပရောဖကျမြား' 'ဖြစ်သင့်သလားဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာမာလခိထံမှနှစ်ခုကိုးကား, ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားကျဟရှောယကနေလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်အနာဂတ္တိကျမ်းရေးဖို့မှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်အသက်အကြီးဆုံးစာမူတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်:
" သာ. ကျယ်ပြန့်မိတ်ဆက်အသုံးအနှုန်းမှ (ထိုအာလေဇနှင့်အနောက်တိုင်းစာသားကိုအမျိုးအစားအစောဆုံးမျက်မြင်သက်သေများအတွက် FNns ပုဖတ်)" အနာဂတ္တိကျမ်းပရောဖက်ဟေရှာယ "ဒါဟာကူးယူသူတို့သည်စကားများပြောင်းလဲသွားပြီအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ထို့ကြောင့်လွယ်ကူသည်" ။ "(2 Metzger, စာမျက်နှာ ။ 62)
ကကျဟရှောယအဖြစ်ပရောဖက်တို့ကိုထောက်ပံ့စာလုံးသေး၏စာမူတစ်အများစု FNns လျှင်ပင် Metzger အဆိုအရကရွေးချယ်ဖို့ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါပရောဖက်ဟေရှာယ" ပရောဖကျအကြာတွင်ဒေသနာကိုစာသား (ဆိုလိုသည်မှာဘိုင်ဇင်တိုင်း) မှကွဲပြားနေသည်။ ဒါကြောင့်တကယ်သူတို့နောက်တော်သို့လိုက်ခြင်းမရှိသိပ္ပံနည်းကျအလုပ်လုပ်မော်ဒယ်ခဲ့ပေမယ်သမ္မာကျမ်းစာစာသားကိုရှေ့ဦးစွာ မှစ. အမှားအယွင်းများပါရှိသောကြောင့်ယူဆထားတဲ့တစ်ခုသာထင်ကြေး။ များစွာသောမှားယွင်းမှုများပါရှိသည်ရာ Alef (Sinaiticus), Matt အတွက်တူညီတဲ့အမှား handwriting သတိပြုပါ။ 2nd: ကလည်းပရောဖက်ဟေရှာယဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကိုးကားဆာလံ 78 သည်အဘယ်က 13:35, တူညီတဲ့အမှားနှင့်အတူအခြားအဂရိစာမူရှိခဲ့သည်တဲ့အခါဒီအမှားသို့သော်အတည်ပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။
ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား, Mark 9:42
မာကု 9:42 သောသူမူကားငါ့ကိုယုံကွညျသောဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမှားယွင်းစေရကြလိမ့်မည်, ဒီအကြှနျုပျအဘို့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအချို့စာမူအတွက်ချန်လှပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်:
ကျနော်တို့စကားများများအတွက်ထောက်ခံမှု၏အကျဉ်းချုပ်ကိုကြည့် '' ငါ့ကို '' ဗာတီကန်နှင့်ဗားဂိနှစ်ဦးစလုံးနှင့်စာလုံးသေးနှင့်အတူစာမူများ၏အများစုအတွက် FNns အပါအဝင်ရှေးဟောင်းစာမူအကြားတွင်အလွန်ခိုင်မာတယ်။ 6: ဒါပေမယ့် Metzger သော FNns သူတို့၏မှတ်ချက်များအတွက်စကားများမဟုတ်ဘဲမဿဲ 18 ခုနှစ်ထက်အပြိုင်ထံမှပါဝင်သည်ခဲ့ကြကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရေးသားခဲ့သည် ဤအကြောင်းကြောင့်, သူတို့ကထိုစကားတွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကွင်း၌ထားတော်မူ၏။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမပေးပါဘူးအဓိကအကြောင်းပြချက်ကတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ antibysantiska အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်: "ကကွဲပြားခြားနားမှု FNns သောအခါ, နောက်ပိုင်းဘာသာရေးစာသား, ဆိုလိုသည်မှာထံမှကွဲပြားခြားနားသောစာသားကိုရွေးချယ်ဖို့အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဗိုင်ဇန်တိုင်းစာသားကို။ "( 1. Metzger, p ။ 87)
မ။ 5,22 အမှန်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းမရှိနိုင်သော
သို့သော်လည်းငါသည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမိမိညီကိုအမျက် ထွက်. ဖြစ်ပါတယ်သောသူမည်သည်ကား, သင်ဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူစီရင်တော်မူခြင်းအဘို့အထိုက်ဖြစ်လာသည်။ ဤတွင်ဂရိစာမူအတွက်ချန်လှပ်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲစကားပြောဖြစ်ကြသည်။ ဂရိမှာ, ယ့်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်:
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နောက်ပိုင်းတွင်ဒုတိယရာစုဘုရားကျောင်းအဘတို့ထံမှအဟောင်းတွေစာမူနှင့်ပင်ကိုးကားကြားတွင်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ် FNns ပေမယ် Metzger ကသူ့မှတ်ချက်များ၌ဤရေးသားခဲ့သည်:
အဘယ်သူမျှမခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် "ကိုဖတျရှုနေစဉ်" "နောက်ပိုင်းတွင်ဒုတိယရာစုကနေကျယ်ပြန့်သည်ကစကားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမလိုအပ်တဲ့အဖြစ်ချန်လှပ်ခဲ့ကြပေသည်ထက်, ကျမ်းစာ၌ပါပြင်းထန်မှုမတိုင်မီပျော့ပြောင်းမှစာသားကူးယူသူများကဆက်ပြောသည်ခဲ့အများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်။ " (P ကို ။ 11, Metzger 2)
Metzger နှင့်အခြားအယ်ဒီတာများသာစကားလုံးကဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကူးယူသူတစ်ဦးစကားလုံးလွဲချော်သောစိတ်ကူးမှမဖွင့်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်မြင်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကဒီရွေးချယ်မှုကိုလုပ်သလဲ? သငျသညျအဘယျကွောငျ့နားလည်နိုင်အောင်သင်သည်သူတို့၏ antibysantiska အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်ကိုသိတဲ့အခါ။ သူတို့က "နောက်မှဒေသနာကိုစာသား (ဆိုလိုသည်မှာဘိုင်ဇင်တိုင်း) မှ deviates သောစာသားကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲချန်လှပ်များအတွက်တစ်ဦးကထပ်မံအကြောင်းပြချက်ကိုအသင်းတော်ဖခင်ကသြရီဂျင်ဒီခဲ့ကြောင်းစာမူခဲ့ပေမယ့်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲထည့်သွင်းခဲ့သည်ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (3 Burgon, စစ။ 359-360)
Lk ။ 2:33 ယောသပ်နှင့်သူ၏ဖခင်
တချို့ကစာမူ "ယောသပ်နှင့်သူ၏မိခင်အံ့ဩ ... " ရှိသည်ဟုအခြားစာမူ "သူ့ဖခင်နှင့်မိခင်အံ့ဩ ... " ရှိနေစဉ်။ ယောသပ်နှင့်သူ၏ဖခင်ဖြစ်လည်းမရှိလျှင်အပျိုကညာမွေးအမြင်၌အလွန်အရေးပါသည်။ ဤတွင်အကျဉ်းချုပ်ထုတ်မယ့်:
ကျနော်တို့စာလုံးသေး၏ဂရိစာမူတစ်အများစုကယောသပ်ကိုဖြစ်ရန်အဘို့အထောကျပံ့ပေးကြောင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်လည်းအဟောင်းလက်တင်စာမူတစ်အများစုကြည့်ရှုပါ။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 170 နှစ်အထိပြုသကဲ့သို့လေးပါးခရစ်ဝင်ကျမ်း၏တရှေနျစုစည်းခုနှစ်, Josef ကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဂျေရုဆလင်ရဲ့အရေးအသား၏စိရယျလျ, အလယ်ပိုင်း 300 ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်, သူ့ဖခင်ကပြောပါတယ်။
Metzger သူတို့ (ဆိုလိုသည်မှာ, ငါးအယ်ဒီတာများ) ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသတို့သမီးကညာမွေးဖွားကာကွယ်ပေးရန်အမှားတညျ့သည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်။ (2 Metzger, စစ။ 111-112) ဒါဟာယောသပ်နှင့်သူ၏ဖခင်များအတွက်ထောက်ခံမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံးထားတဲ့ရှေးစာမူ FNns ။ သင်သည်တစုံတခုကိုသက်သေမပြနိုင်ပေမယ့်သင်ရွေးချယ်စရာတွေထဲကရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်။ Metzger နှင့်အခြားအယ်ဒီတာများဟာအမှားရှေ့ဦးစွာ မှစ. ရှိခဲ့ပြီးတော့အမှားများ၏ဘုရားကျောင်းတညျ့သောမျှတမှုနှင့်အတူမိမိအဘ၏သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲရွေးချယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် "အမှား" ထို့နောက်ရှေးဦးစွာ မှစ. ထိုအရပ်၌အမှားများကိုအလိုအလျောက်ပါးစပ်ဂီယာနေရာယူကြပြီရမယ်သော unproven ယူဆချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့ထင်ကြေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုကိုထပ်မံလွှဲပြောင်းသာနှုတ်ရာအရပျကိုယူတဲ့ unproven ထင်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က, က "နောက်ပိုင်းမှာဒေသနာစာသားကို" မှ deviates သောစာသားကို select လုပ်ပါမှ, ဆိုလိုသည်မှာမိမိတို့၏ antibysantiska အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်အတိုင်းလိုက်နာဆက်လက် ဗိုင်ဇန်တိုင်းစာသား။
မ။ 6: 1 လက်ဆောင်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်
ထောက်ခံမှုအသက်အကြီးဆုံးစာမူကြားတွင်လက်ဆောင်တစ်ခုကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ပေမယ့်ဒါကြောင့်၎င်း၏ထောက်ခံမှုပေးကြောင်းအနည်းငယ်ရှေးစာမူ FNns ။ ထို့အပြင်တရှေနျနှင့်သြရီဂျင်၏အရေးအသားအကြားဆုကြေးဇူးကို FNns ။ တရှေနျ 200 ရဲ့အစောပိုင်းအတွင်းက 100 ရဲ့နှောင်းပိုင်းကများနှင့်သြရီဂျင်အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာ "ကောင်းသောအကျင့်ကိုဖျော်ဖြေသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်က" läsvariantenနားလည်သဘောပေါက်ရန်ထင်ရှားတဲ့စာသားဝေဖန်သူများကမဖွစျလိုအပျသညျအခွားသမ္မာကျမ်းစာစာသားကိုဆန့်ကျင်သောအရာတစ်ဦးကမှားခေါ်ဆိုခဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများအစောပိုင်းခရစ်ယာန်ခေတ်မှပြန်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်အမျှရွေးချယ်မှုစာသားနဲ့အခြားကျမ်းပိုဒ်နဲ့အညီဖြစ်သင့်သကဲ့သို့စစ်မှန်သောဆုကြေးဇူးကိုအသိအမှတျပွုကသဘာဝဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာအားလုံးကမျြးစာကိုသုံးပါတယ်ခဲ့သူသခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာသည်ဤအယ်ဒီတာများမှန်ရာကို၏မိစ္ဆာရှေ့ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါအယ်ဒီတာများ၏အတော်ကြာတညျ့ကတည်းကစာသားထဲမှာအမှားများကြောင့်ဘုရားကျောင်းများ၏ပါးစပ်ဂီယာ၏ရှိခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ ( 5. Black က, p ။ 633. 6. Metzger, p ။ 86) သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ကိုလူများတို့ကနှုတ်ဆင်းလွန်ခံခဲ့ရသည်ဟုသူကပြောပါတယ်အခါသခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်ချေပသောမုသားဖြစ်ပါတယ် "လူအပေါင်းတို့သည်အညီကျမ်းစာလာသည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ " (2 တိ။ 3:16)
မာကု။ စည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက် 10:24 ယုံကြည်မှု
ရှေးခေတ်ဂရိနဲ့လက်တင်စာမူတစ်ခုလွှမ်းမိုးသောအများစုနှစ်ခုစာမူတီနှင့် Sinaiticus အတွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စကားထောက်ခံမှုပေးပါ။ Metzger အောက်ပါမှတ်ချက်ပေးသည်: ယေရှုရဲ့ကြေညာချက်၏ပြင်းထန်မှုက၎င်း၏ယေဘုယျကန့်သတ်သည်အခြား kvalifkation ၏နိဒါန်းအားဖြင့်ပျော့ပျောင်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာစာသား၏ဆက်စပ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ခဲ့သည်။ (2 Metzger, p ။ 90) ဒါဟာသူတို့ရဲ့အခြေအမြစ်မရှိ antibysantiska အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီသောမှန်းဆခြင်းမရှိဘဲသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သောခြုံငုံလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Lk ။ 9:35 ကိုချစ်၏သို့မဟုတ်ရှေးခယျြ
အဆိုပါခြုံငုံလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းချစ်သောသားတော်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ Metzger ရဲ့မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
မူလကကလုအတွက်ခြောဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်သာကဒီမှာဖြစ်ပေါ်ရသောရှေးခယျြ, ရပ်နေကြ၏။ တစ်ဦးထက်ပိုသောဘုံစကားရပ်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသောဒုတိယ option ကို, အတူတကွ FL ätningချစ်ရာသခင်သည်သားတော်သည်ရေးသားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (2 Metzger, စစ။ 124)
ကျွန်တော်တို့ကိုMfråga: သညျယရှေုကိုရှေးခယျြဘာ မှစ. ? ဘယ်လိုတဦးတည်းနှင့်တစ်ဦးတည်းသာမူရင်း၏ရှေးခယျြခဲ့သနိုငျသညျ, ကျနော်တို့သားတော်ကိုမရွေးရမညျနညျး ကျနော်တို့ကနေရှေးခယျြဖို့နီးပါးကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုရွေးချယ်စရာရှိသည်။ Metzger ကြောင့်မူလကရွေးချယ်သောတဦးတည်းဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလုံးဝအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသနျ့ရှငျးသောဘုရားသမ္မာကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြင့်ပေးထားပေမယ့်စာသားလူ့မစုံလင်မှုနှင့်အတူပါးစပ်ကနေပါးစပ်မှလွန်ခဲ့ယုံကြည်လျှင်, တညျ့ခံရဖို့လိုအပ်သောများစွာသောမှားယွင်းမှုများ FNns ။ "သမ္မာကျမ်းစာရှေ့ဦးစွာ မှစ. လူတို့အလုပျတလျှောက်လုံးဖြစ်ပါတယ်" (8 ဆွီဒင်ကမျြးစာကလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ပတ်လည်) Personne ကို 1917 ဘုရားကျောင်းကမျြးစာကိုပေးတျောမူသောသူလူသုံးယောက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါက Personne ဟုပြောယုတ္တိရှိလိမ့်မည် သငျသညျ Personne, သမ္မာကျမ်းစာယောက်ျား၏အလုပ်ကြောင်းယုံကြည်လျှင်သင်ရှေးခယျြရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျသနျ့ရှငျးသောဘုရားသမ္မာကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းယုံကြည်လျှင်, အကြှနျုပျ၏ချစ်သူတို့သားတော်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဖြစ်မှု။ ငါ့ကိုယုံကြည်သော 6:47 သူ
အဆိုပါခြုံငုံလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှေးခေတ်ဂရိစာမူဤစကားများအားချန်လှပ်ပေမယ့်, မှန်သည်ငါ့ကို၏စကားမှ၎င်း၏ထောက်ခံမှုပေးသည်။ တရှေနျသူသည်ငါနှင့်အတူခဲ့ဘယ်မှာ 170 နှစ်ကအကြောင်းကိုလေးပါးခရစ်ဝင်ကျမ်း၏စုစည်းလုပ်လေ၏။ Metzger အောက်ပါမှတ်ချက်ပေးသည်:
ငါ့ကို၏ထို့အပြင်သဘာဝအများနှင့်မလွှဲမရှောင်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအံ့အားသင့်ကူးယူသူကိုအတော်လေးအများအပြားသွေးဆောင်မှုကိုခုခံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စကားတော်မူလစာသားထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ခဲ့, ဒါကြောင့်စကားများချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်ဘာကြောင့်တဦးတည်းကောင်းသောရှင်းပြချက်အဘယ်သူမျှမရှိသေး၏။ အကယ်. (2 Metzger, စစ။ 183)
ဒါဟာမဟုတ်အများအပြားစာမူဒီအမှားကူးယူကြ FNns ။ အဆိုပါခြုံငုံလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ကို options နှစ်ခုပေးသည်။ အဘယ်သူမျှမစကားအစအဦးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးရာမှဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ငါးအယ်ဒီတာများသူတို့တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းပြချက်တွေ့မြင်နိုင်သည်သောမြေပြင်ပေါ်တွင်က "နောက်ပိုင်းမှာဒေသနာစာသားကို", ဆိုလိုသည်မှာထံမှ deviates သောစာသားကို select လုပ်ပါ, သူ၏ antibysantinska အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်အဖြစ်ဆက်လက် စာသားကိုကူးယူသောသူတို့အားဤအရပ်၌ချို့တဲ့ခဲ့ရာတညျ့။ သူတို့ကကူးယူတစ်စုံတစ်ဦးသတိလစ်သူတွေကိုစကားလုံးနှစ်လုံးလွဲချော်ပြီးတော့အခြားသူများကိုသင့်ရဲ့မိတ္တူမှပေါ်မှာဤအမှားလွှဲပြောင်းသောမဟုတ်ဘဲသိသာစိတ်ကူးမှပွင့်လင်းကြဘူး။ စကားများပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အကြင်သူသည်ယုံကြည်နေထာဝရအသက်ကိုရရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ထာဝရအသက်ကိုရှိသည်ဖို့သညျယရှေုကိုယုံကြည်ရမည်ဟုအရေးကြီးသောအမှန်တရားပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
1 ကော။ မိုဃ်းကောင်းကင်ကနေ 15:47 သခင်ဘုရား
Tetullianus, Hippolytus နှင့် Victorinus Pettau ၏ 200 ရဲ့နှင့် Basil မဟာ 300 ရဲ့ထံမှ: အဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့အဘို့အဖြစ်သူ၏အရေးအသားများအတွက်သခင်ဘုရားနှင့်အတူဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့အောက်ပါအတိုင်း။ အောက်ပါအဘတို့ကသူ့အရေးအသားတွေထဲမှာသခင်ဘုရားသည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး: 200 ရဲ့ထံမှ Cyprian နှင့် Poitiers ဟေလာရီနှင့် St. Athanasius 300 ရဲ့ထံမှ။ သငျသညျအရာကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်ရှေးခေတ်ဂရိစာမူထံမှနှစ်ဦးစလုံး, နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများအဘို့အအစောပိုင်းထောက်ခံမှု FNns ။ တစ်ခုမှာဘာသာရေးစာသား, ဆိုလိုသည်မှာ ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူသခင်ဘုရားနှင့်အခြားဘာသာရေးစာသား, ဆိုလိုသည်မှာရှိ ဗားဂိစာမူသခင်ဘုရားမရှိကြပါဘူး။ Metzger သခင်ဘုရားကိုချန်လှပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှတ်ချက်ပေး။ "ဟုအဆိုပါစကားလုံး (သခင်ဘုရား) မူလကရှိခဲ့ပါလျှင်, ဒါ FNns ထဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ဖြစ်၏။ " (2 Metzger, p ။ 501-502) ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်အဲဒါကိုသူတစ်ဦးဦးကဒီစကားလုံးလွဲချော်ကူးယူကြောင်း, တစ်ဦးကူးယူမှားယွင်းမှုများနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပွင့်လင်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းဧကရာဇ်ကွန်မှကျမ်းစာထုတ်ယူသူယူစီးဘီးယပ်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယူစီးဘီးယပ်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ခဲ့ကြောင်းမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီမှာကတည်းကပြီးသားအမျိုးမျိုးသောစာမူအကြားခြားနားချက်များလည်း FNns သူသည်မိမိယုံကြည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောစာမူရှေးခယျြခဲ့သောဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်တည်း။ ဒါဟာစာသားကိုသိပ္ပံပညာရှင်များယူစီးဘီးယပ်တို့ကအမိန့်ဒီကမျြးစာဧကရာဇ်ကွန်ကနေနှစ်ခုဟောင်းစာမူ Alef (Sinaiticus) နှင့် B (ဗာတီကန်) ထင် FNns ။ (7 Skeat, စစ။ 21-22) အဲဒီမှာကတည်းကပြီးသားအမျိုးမျိုးသောစာမူအကြားခြားနားချက်များလည်း FNns သူသည်မိမိယုံကြည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောစာမူရှေးခယျြခဲ့သောဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်တည်း။ ဒါဟာစာသားကိုသိပ္ပံပညာရှင်များယူစီးဘီးယပ်တို့ကအမိန့်ဒီကမျြးစာဧကရာဇ်ကွန်ကနေနှစ်ခုဟောင်းစာမူ Alef (Sinaiticus) နှင့် B (ဗာတီကန်) ထင် FNns ။ (7 Skeat, စစ။ 21-22) အဲဒီမှာကတည်းကပြီးသားအမျိုးမျိုးသောစာမူအကြားခြားနားချက်များလည်း FNns သူသည်မိမိယုံကြည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောစာမူရှေးခယျြခဲ့သောဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်တည်း။ ဒါဟာစာသားကိုသိပ္ပံပညာရှင်များယူစီးဘီးယပ်တို့ကအမိန့်ဒီကမျြးစာဧကရာဇ်ကွန်ကနေနှစ်ခုဟောင်းစာမူ Alef (Sinaiticus) နှင့် B (ဗာတီကန်) ထင် FNns ။ (7 Skeat, စစ။ 21-22)
1 တိ။ ဇာတိပကတိ၌ 3:16 ဘုရားသခင့မန်နီးဖက်စ်
ဤတွင်မေးခွန်း) မဆိုရှိလိမ့်မည်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ။ ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျဘုရားသခငျသညျ, သို့မဟုတျသူ (စာသားကြောင်းကိုတစ်ဦးကအလွန်အားကောင်းတဲ့အတည်ပြုချက်ကို: ထိုကဲ့သို့သောယေဟောဝါသက်သေများအဖြစ်၌ထင်ရှားအတော်များများအမှန်ဆိုရလျှင်, ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျဇာတိပကတိ၌ထင်ရှားသောဤအမှန်တရားကိုထောက်ခံသူတွေအနိုင်ရရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဘေးလွတ်သော left ခဲ့ ။ အများအပြားအစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့ Metzger အရသိရှိရသည်။ သူရေးထားသောစာများတွင်ဒါပေမယ့် 300 ရဲ့အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်သူဘုရားကျောင်းဖခင် Nyssa ၏ဂရက်ဂိုရီ, သူတို့ရဲ့အရေးအသားတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိုရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကပရင်တာအဖြစ်အတွေးမှားကိုစာလုံးပေါင်းနှင့်ကပြောင်းလဲခဲ့သည်ကြပေမည်သည့်စကားလုံးတစ်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခဲ့သည်ထင် ဘုရားသခငျ, Metzger နှင့်အခြားအယ်ဒီတာများမှဘုရားသခင်အားပြုပြင်ထားသောပရင်တာမှလူတိုင်းအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်အခြားရွေးချယ်စရာ "ဟု သာ. ကြီးတစ်ယူသန်ဆန်တိကျပေးပါ။ " Metzger ကြောင့်ဖြစ်ဘို့သြရီဂျင်ကိုထောက်ခံမှုအပါအဝင်ကိုးကား, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသြရီဂျင်သင်သိရ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ဒေသနာ၌မယုံကြည်။ (2 ။ Metzger, p ။ 573-574) အဲဒီမှာဘုရားတစ်ဦးသည်စစ်တိုက် 300 ရဲ့မှာကစာသားကနေဘုရားသခင့ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုခဲ့သည့်တပ်ဖွဲ့များရှိကြ၏ယူဆအလှမ်းဝေးမဟုတ်ပါဘူး။
မာကု။ 16: 9-20
မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုစာသား၏ဤမြေတပြင်လုံးကြီးမားသောအပိုင်းတစ်ဦးဖြည့်စွက်သောအမြင်သစ်အခြေခံစာသားငါးအယ်ဒီတာများ။ ကြိုးစားမှုသမ္မာကျမ်းစာမှထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လုပ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ဘာသာပြန်ချက်မဝယ်ဖို့မအများအပြားကမျြးစာကစာဖတ်သူတွေကိုရှေးခယျြခဲ့ပါပြီ။ ထို့ကြောင့်ဤတကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဝံ့ပေမယ့်။ * Instance အဘို့, သက်ဆိုင်ရာမူရင်းခရစ်ဝင်ကျမ်း, ပိုင်ပါဘူးတဲ့ extension တခုဖြစ်တယ်ရိုက်ထည့်ကြဘူး။ 1917, သမ်မာကမျြး 2000 ဂျိမ်းဘုရင်နှင့် nuBibeln ။ ဤကျမ်းပိုဒ်စစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားအလွန်ခိုင်မာတယ်။ ဤ FNns ၏ 618 ကဤတကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူအတွက်, မာကုဆံ့ထားတဲ့ 620 ဂရိစာမူ FNns ။ ဒါဟာသူတို့ပျောက်ဆုံးနေသာနှစ်ခုစာမူ Alef (Sinaiticus) နှင့် B (Vatinanus) ၌တည်ရှိ၏။ တစ်ချိန်တည်းတစ်ဦးထံမှအစောပိုင်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးက, ရှိသမျှတကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူရှိသည်။ အားလုံးအဟောင်းလက်တင်စာမူ K သည်မှတပါးကျမ်းပိုဒ်ရှိသည်, အရာတိုတောင်းတဲ့ finish ကိုရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့ဂျတ် ca. ထံမှဤတကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်ကနေကိုးကား 150 စီအီး .. နောက်ပိုင်းတွင်နှင့် Irenaeus ယခုနှစ် 180, Mark ကနေတစ်ခုလုံးကိုကျမ်းပိုဒ်ကိုးကား။ 16:19 ။ အဆိုပါ Sinaiticus နှင့်တီတိကျမ်းစာ၌လာသည်မတိုင်မီသူတို့နှစ် 200 တည်ရှိပါလျှင်မည်သို့ကျမ်းပိုဒ်ကဆက်ပြောသည်ရမည်လော ထို့အပြင်ဤစာမူ၏နှစ်ဦးစလုံး, Alef နှင့် B သောပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမ်မာကမျြးစာသားကိုကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်, ကြီးမားတဲ့အချည်းနှီးသောအာကာသထွက်ခွာကျမ်းပိုဒ် omits ။ ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကပျောက်ဆုံးစာသားကို fnna မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်နောက်မှအဲဒီမှာရေးပါ။ စာသားမဝေဖန်နှစ်ခုပုံမှန်စကားပြန် / နောက်ကျောနှင့်ညာဘက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်တကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစတိုင်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်စာသားသုတေသီ Burgon ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဟောပြောသောဤစကားကိုလည်းမာကု၏အခြားအခန်းကြီးချို့တဲ့ရသောအမှုသည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဟုငြင်းခုန်။ သူတို့ကအစယူစီးဘီးယပ်နှင့်ဂျရုမ်းကသူ့စာမူအများစုတွင်ဤကျမ်းပိုဒ်ရှိကြကြောင်းငြင်းခုန်။ သို့သော်ဤမဟုတ်ရင်အဘို့သူတို့ကအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းစာမူ၏နံပါတ်မပေးကြောင်းသစ်ကိုအခြေခံစာသားထောက်ခံသူတွေကိုငြင်းခုန်အလွန်ကွဲလွဲနေသည်။ သို့သော်ဤအမှု၌, ရုတ်တရက်သက်ရောက်မှုများ၏အရေအတွက်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ငြင်းခုံအဘယ်သူမျှမဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကိုကိုင်ထား FNns ။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင် add သို့မဟုတ်နုတ်လျှင်ဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်အဘယျသို့အကြိုးဆကျကိုသိသောအခါ, တကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်ပေါင်းထည့်ရလိမ့်မယ်လို့တကယ်တစ်ဦးတော်တော်လေးအလှမ်းဝေးစိတ်ကူးပါတယ်။
ဒါဟာ Metzger နှင့်အခြားအယ်ဒီတာများဤကျမ်းပိုဒ်ကဆက်ပြောသည်စဉ်းစားပေမယ့်အစားနှစ်ခုစည်းမျဉ်းများပါဝင်သည်အရာကသူတို့အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်ကြောင်းစုစုပေါင်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့သူဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့ကနေကိုးကားမဟုတ်ပါဘူး:
ဘယ်အချိန်မှာ B က (ဗာတီကန်) နှင့် Alef (Sinaiticus) သဘောတူညီခဲ့ပေမယ့်ဒီနှစ်ခုကိုလိုက်နာသည်အခြားစာမူထံမှမတူနေကြသည်။
ဘယ်အချိန်မှာ FNns ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးစာသား, ဆိုလိုသည်မှာထံမှကွဲပြားခြားနားသောစာသားကိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူ။
ကျနော်တို့အခုအသစ်ကအခြေခံစာသားကိုမှစာသားရွေးချယ်ရေးထံသို့ ဝင်. မည်ကဲ့သို့ပြသနိုင်ဖို့တကျိပ်နှစ်ပါးသောကျမ်းပိုဒ်မှတဆင့်ဝင်ကြပြီ။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏အချို့သညျယရှေုဘုရားအဘို့အထောက်ခံမှုအသုံးအနှုန်းများအတွက်ဝိရောဓိနှင့်အခြားသူများမဆိုင်ပါဘူး။ အမျိုးမျိုးသောစာမူများ၏ထောက်ခံမှုတယောက်ကိုတယောက်အရပျမှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံထောက်ခံမှုအားကောင်းနှင့်တခါတရံအားနည်းအသက်အကြီးဆုံးစာမူကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အလွန်မကြာခဏဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကို / တစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းဂရိစာမူထံမှစာသားထောက်ခံမှုရရှိထားသည့်။ စာသားမသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သူတို့က 1500 ခုနှစ်တွင်ရှိခဲ့ထက်အဟောင်းတွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့စာမူမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသညျကား, ဒါပေမယ့် B က (ဗာတီကန်) ထားပြီး 1500 ခုနှစ်တွင်လူသိများနှင့် Alef (Sinaiticus) တကယ်ကောင်းတစ်ဦးလက်ရေးမဟုတ်ပါဘူးခဲ့သည်။ ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွက်ကူးယူမှားယွင်းမှုများသော FNns များစွာသောလူသိများအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောမကောင်းတဲ့လက်ရေး FL ကသစ်ကိုဂရိစာသားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် uence ရှိပါပြီမပြုသင့်ပေ။ ရှေးခယျြစေသင့်ပါတယ်ဘယ်သူက: စာမူရရှိမှုဟာ 1500 ခုနှစ်ထက်ယနေ့ပိုကောင်းဖြစ်ကြပေမယ့်, ကအရေးပါသညျ့မေးခှနျးဖြစ်လာ? ခရစ်ယာန်များသည်ဖြစ်ကြပြီးကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းပေးသောနှင့်စာသားတစ်ရွေးချယ်ရေးအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များအတွက်သခင်ဘုရား၏ Providence ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းယုံကြည်သူများသည်။ သို့သော်ကျမ်းစာ၌လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ပေးထားကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး, နှင့်သခင်စာသားကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းယုံကြည်ကြဘူးသောသူတို့က, သူတို့အခြားရွေးချယ်ရေးပါစေ။ သူတို့ပါးစပ်ဂီယာကိုယုံကြည်သောကြောင့်, သူတို့ဆိုလိုသည်မှာအဲဒါကိုစာသားအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု FNns သောအခါ, အကြာတွင်ဒေသနာကိုစာသားအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသောစာသားကို select လုပ်လုံခြုံဆုံးကြောင်းဆိုလိုတာ ဘိုင်ဇင်တိုင်း။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့သူတို့ကဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကိုကနေသွေဖည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်အောင်လျှင်ရွေးချယ်မှုဘိုင်ဇင်တိုင်းနှင့်ဗားဂိစာမူအကြားခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာမူခ (တီ) ကိုလိုက်နာဖို့အားလုံးကိုအထက်တွင်လိုချင်ပေမယ့်သူတို့ကဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူနှင့်အတူနှင့် B (ဗာတီကန်) တွင်အောက်ပါဒါမှမဟုတ်ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကိုကနေသွေဖည်အကြားရွေးချယ်မှုအတွက်တသမတ်တည်းကြောင့်ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထံမှထွက်သွားဖို့ရွေးချယ်သည့်အခါငါတို့သည်လည်းကြိမ်တွေ့နိုင်ပါသည်, အဖြစ် သူတို့ကဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသားကိုကနေသွေဖည်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒါကဒါကြောင့်လူသိများမဟုတ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်မော်ဒယ် antibysantiska, တဦးတည်း Metzger ရဲ့စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုခန့်ဖတ်နိုင်သည်။ ( 1. Metzger, p ။ 87) ဒါကသိပ္ပံနည်းကျအလုပ်မော်ဒယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်မဲ့တွန့်ဆုတ်ဘိုင်ဇင်တိုင်းစာမူနှင့်ရရှိထားသည့်စာသားအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိအကြောင်းကိုကျမ်းစာရဲ့သက်သေခံချက်ကိုလျစ်လျူရှုသောကွောငျ့ထိုသို့သောအလုပ်လုပ်မော်ဒယ် unscientific ပေမယ့်ဘက်မှာကျမ်းစာနှင့်မညီသာဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်များသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သုံးပါတယ်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းယုံကြည်ပါကတစ်ရွေးချယ်ရေးစေခဲ့စုပေါင်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းအတွက်ကိုယ်စားပြု FNns ဖြစ်လာသည့်မူရင်းဂရိစာသား, ဆိုလိုသည်မှာခဲ့အဖြစ် ထို့နောက်ရရှိထားသည့်စာသားတစ်ခုဆက်လက် fck သောဘိုင်ဇင်တိုင်းစာသား။ အားလုံး၎င်း၏အမှားဝိရောဓိနှစ်ခုခြွင်းချက်နှင့်တကွ, 1900 ရဲ့နှင့်အစောပိုင်း 2000 ရဲ့စဉ်အတွင်းအားလုံးနီးပါးဆွီဒင်ဘာသာများအတွက်အခြေခံဖြစ်နှင့်အတူဒါပေမယ့်ကံမကောင်းသစ်အခြေခံစာသား, ။ ကားလ် XII သမ်မာကမျြး 1923 တဖန်ထမ်းဘိုးကိုတည်းဖြတ်မူ, ထိုရရှိထားသည့်စာသားပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဦးစလုံး။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်သာ 3300 သောအရပ်တို့ကိုလှည့်ပတ်ပြောင်းလဲမှုများစိုးရိမ်! ပိုမိုသိချင်သောသူတို့အဘို့, ကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်, သွားရောက်လည်ပတ်အကြံပြု bibel.se သင်ဗီဒီယိုများနှင့်များစွာသောဆောင်းပါးများနှင့်ငြင်းခုံမှုများခံစားနိုင်ရှိရာ, ။
ဘို Hagstedt, ဥက္ကဋ္ဌ
အန်ဒရီ Juthe Ph ။ ဃ
သမ်မာကမျြး - တစ်မမှန်ကန်ကြောင်းအခြေခံစာသားကို -5၏အပိုင်း 1
သမ်မာကမျြး - တစ်မမှန်ကန်ကြောင်းအခြေခံစာသားကို -5၏အပိုင်း 2
သမ်မာကမျြး - တစ်မမှန်ကန်ကြောင်းအခြေခံစာသားကို -5၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု 3
သမ်မာကမျြး - တစ်မမှန်ကန်ကြောင်းအခြေခံစာသားကို -5၏အစိတ်အပိုင်း 4
သမ်မာကမျြး - တစ်မမှန်ကန်ကြောင်းအခြေခံစာသားကို -5၏အစိတ်အပိုင်း 5
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကမျြးစာက - ဓမ်မဟောငျးကမျြး
BJB - ဓမ္မသစ်ကျမ်း
| ငါတဖန်ဝယ် apg29
ဘရုစ်အမ် Metzger, ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏စာသားက 1968 ခုနှစ်တွင်ဂီယာ, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, 4th edition, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကသတင်းထုတ်ပါတယ်။
ဘရုစ်အမ် Metzger, ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်း, 2nd ထုတ်ဝေအပေါ်တစ်ဦးက Textual Commentary, Deutsche Bibelesellschaft / ဂျာမန်သမ်မာကမျြးလူ့အဖွဲ့အစည်း, စတုဂတ်, 8th ပုံနှိပ်ခြင်း။ 2007 ခုနှစ်တွင်။
ဂျွန်ဝီလျံ Burgon, အဆိုပါတည်းဖြတ်မူ Revised, ဒုတိယပုံနှိပ်, 2000 ခုနှစ်ဒင်း Burgon Society ကစာနယ်ဇင်း, နယူးဂျာစီ။
ယနေ့တွင်စာနယ်ဇင်း, နယူးဂျာစီပြည်နယ်, 2005 ဘို့ဂျေအေ Moorman, အစောပိုင်းစာမူ, ဘုရားကျောင်းအဘတို့နှင့်, Authorized ဗားရှင်း, သမ်မာကမျြး Moorman လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သက်သေအထောက်အထား FNns ပြုစုပင်ဘုရားကျောင်းအဘတို့ကိုးကားထားသည်။ သူကိုအသုံးပြုထားပြီးအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်တော်တော်များများကိုးကားများမှာ 1975 ခုနှစ်တွင် Tischendorfs အဋ္ဌမထုတ်ဝေ, Nestle က-အော်လန်ဗားရှင်း 26, ကျမ်းစာအသင်းတတိယစာစောင်, အ Kurt အားဖြင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ဘာဘရာအော်လန်၏စာသားအတွက်စာမူမြေပုံများ, မဿဲနှင့်မာကု၏အီး Leggs edition မှာဖြစ်ပါတယ် ဗွန် Soden, Hodges နှင့် Farstad, ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း Hoskier ၏အော်လန်အနှစ်ချုပ်ကနေယူ။
မဿဲက Black, သမ္မာကျမ်းစာ, Revised Edition ကို 1962nd အပေါ် Peak ရဲ့ Commentary
ဘရုစ်အမ် Metzger, ဓမ္မသစ်ကျမ်း, ၎င်း၏နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း, ကြီးထွားမှုနှင့်အကြောင်းအရာ, လို့ Abingdon စာနယ်ဇင်း, 1965th
TC Skeat, အဆိုပါ Codex Sinaiticus နှင့် The Codex Alexandrinus, လန်ဒန်, ဗြိတိန်ပြတိုက် 1963 ၌တည်၏။
ဆွီဒင်ကမျြးစာကလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ, 1886 ခုနှစ်ဧပြီလ 21 မိနစ်။
Vecka 34, torsdag 22 augusti 2019 kl. 00:06